२ वर्षमा नाफा ४९ प्रतिशत बढ्ने नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रक्षेपण, लगानीकर्ताले कति पाउने छन लाभांश ?
विकासन्युज २०७५ श्रावण २४ गते १:३६
काठमाडौं । आउदो २ वर्षभित्र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नाफा ४८.७१ प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा नाफा बढाएर ८५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा नेशनलको नाफा ५७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्ष बढेर ७१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुग्ने कम्पनीको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ देखि हालसम्मको वित्तीय विवरण हेर्दा नेशनलको नाफा निरन्तर बढ्दै गएको छ ।
कम्पनीले आम्दानी बढेर आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा १ अर्ब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७१ करोड ७३ लाख र चालु आर्थिक वर्षमा ८८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ ।
नाफामा भएको वृद्धिसंगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी(ईपीएस) ३२ रुपैयाँ ४३ पैसा पुग्ने प्रक्षेपण नेशनलको छ । गत आर्थिक वर्षमा २१.८१ र चालु आर्थिक वर्षमा बढेर २७ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । प्रतिसेयर खुदसम्पत्ति बढेर २०३ रुपैयाँ पुग्ने छ । गत वर्ष १४३ रुपैयाँ र चालु वर्षमा १७० रुर्पैयाँ ७४ पैसा पुग्ने अनुमान छ ।
यस्तै जगेडा कोषको आकार बढेर आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा २ अर्ब ७३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गत वर्षसम्म १ अर्ब १५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बढेर १ अर्ब ८७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा जीवन बीमा शुल्क आम्दानी बढेर १० अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । गत आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बढेर ७ अर्ब ८९ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुग्ने कम्पनीको प्रक्षेपण छ ।
कम्पनीले चुक्तापूँजी बढाउन ६० प्रतिशत अर्थात ९९ करोड ३४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ । हकप्रद निष्कासन भदौ ५ गतेसम्म खुला गरिएको छ । हकप्रद निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी बढेर २ अर्ब ६४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । कम्पनीमा नेपालीको ४५, विदेशीको १०, सर्वसाधारणको ३५ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १० प्रतिशत स्वामित्व छ ।
Sen. Float -0.4662